Spotify ewepụtara wijetị ọhụrụ na beta Android | Androidsis
Nwere ike iji wijetị Spotify ọzọ site na beta ma jiri nke ọzọ mee ihe
Na njedebe nke August anyị nụrụ akụkọ dị mwute na Spotify wepụrụ wijetị ya na gam akporo. Ma taa, anyị ma na o weghachila ya. Na ime ka anyị dị umengwụ, nyekwa ebe ọ na-ewute, anyị ga-eji wijetị ndị ọzọ mee ka ụbọchị gị dịkwuo ọkụ.
Ya bụ, ọ bụrụ na ị ugbu a gafere Spotify wijetị, ọ ga-abụ n'ihi na Nke a nke ọzọ anyị ga-egosi gị ga-ejere gị ozi ka ịkpọọ egwu ọkacha mmasị gị, wee gaa n'ihu na ọrụ gị mgbe ị na-eme mkpịsị ugodi na desktọpụ na-abanyeghị ngwa.
1 Ngwa Spotify alaghachila
2 Ọ bụrụ na ịgafe beta, wụnye SpotWidgetX ka ị nweta ya ọzọ
Ngwa Spotify alaghachila
Mgbe nweta ọtụtụ mkpesa sitere n'aka ọtụtụ ndị ahịa gị, Spotify ekwuputala ụbọchị gara aga na ọ ga-eweghachite wijetị ya na android. Ndị mmepe ahụ emeela mmelite na arụmọrụ yana imewe nke mere na mmelite n'ọdịnihu ga-anọchi ya ọzọ.
Ma ọ bụ taa mgbe onye ọrụ achọtara na Spotify beta nloghachi mmeri nke wijetị Spotify. Ọ bụ kpọmkwem na beta 8.5.23.535 na gam akporo ebe ị nwere ike ịhụ wijetị iji nọgide na-eji ya na desktọpụ.
Ozi ọma na Spotify egela obodo onye ọrụ gị ntị na n'elu nke ahụ ha emelitela wijetị ha ka ọ dabara na nhazi nke ngwa mkpanaka ha. Ihe anyị na-atụ egwu bụ na ọ ga-ewe ogologo oge karịa nke ha imelite ya, mana ọ bụ ụbọchị ole na ole tupu ọ erute na ọwa beta na ndị chọrọ enweelarị ịnụ ụtọ ya site na ịgbalite beta site na Ụlọ Ahịa Google Play.
Ọ bụrụ na ịgafe beta, wụnye SpotWidgetX ka ị nweta ya ọzọ
Ụbọchị ndị a mgbe mwepu nke Spotify wijetị mere akụkọ, e nwere ụfọdụ onye nrụpụta nke merela ngwa ngwa iji ohere ahụ mee ihe. Ya mere, ọ bụ, anyị nwere SpotWidgetX na, maka ndị nke na-achọghị ịwụnye beta na-eche maka nloghachi nke Spotify wijetị na ikpeazụ version, ọ na-eje ozi zuru okè iji dochie ya.
SpotWidgetX bụ nwijetị ndị ọzọ ọhụrụ maka ngwa Spotify nke ahụ na-eweghachite ọrụ ahụ maka onye ọ bụla chọrọ ya na tebụl ha. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ nweghị ihe na-eme ma ị nwere ike ịnwe ọrụ kacha mma nke wijetị ọrụ nkwanye site na mkpanaka gị site ugbu a gawa.
SpotWidget X nwere a ụdị adịchaghị na ụdị efu. Site na ebe a, anyị na-agba gị ume ka ị nwalee ya n'efu wee gaa na ịkwụ ụgwọ nke 1,09 euro iji kpochapụ mgbasa ozi. Mgbe ị wụnye ngwa ahụ, ị ​​​​ga-ahụ wijetị ka ọ dị njikere ịgbakwunye na desktọpụ mkpanaka gị dị ka a ga-asị na e wepụbeghị ya na ya.
SpotWidgetX bụ na-ahụ maka ịmalite Spotify na ndabere na-enweghị ọbụna ịmara na ọ na-arụ ọrụ na ị gaghị ahụ ọbụna ngosi ngosi. Ị nwere ike megharịa wijetị dịnụ wee nwee njikwa ọkpụkpọ site na desktọpụ. Ha na-aga n'ihu ma ọ bụ azụ ihe dị ka sekọn 10, na n'ihe banyere ndepụta ọkpụkpọ, ị nwere ike ịgbalite ugboro ugboro, kwugharịa ihe niile ma ọ bụ gbanyụọ ya.
Este wijetị ndị ọzọ na-arụ ọrụ nke ọma maka ichere ụdị ikpeazụ na-abịa na wijetị Spotify gọọmentị. Anyị na-ekwu ya n'ihi na n'ọdịnihu a wijetị nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ mgbe Spotify ngwa na-emelitere na n'ụzọ ụfọdụ kpochapụ ya ọrụ.
[appbox googleplay spark.me.spotwidget.free
una Spotify na ghọtara nnọọ ngwa ngwa njehie rụrụ Site na mkpochapụ nke wijetị na nke ahụ maka ọṅụ anyị, ọ ga-eme ka ọ dị ọhụrụ nke ọma ka e wee tinye ya na desktọpụ anyị na ikuku ọhụrụ. Ọ bụ otu n'ime ọrụ ndị ị na-enwekarị, mana mgbe ha na-apụ n'anya, ị ga-achọpụta ọrụ niile ha na-enye gị. Mgbe ahụ ịsị na wijetị enweghị ezigbo ojiji. Ee ee, nhazi na ekwentị Android anyị.
Ugbu a ichere wijetị 3 × 1 nke Spotify Ọ gaghị abụ oge na ị nwere ya maka mkpanaka gị n'ihu ọha. Ka ọ dị ugbu a, ihe ekwuru, nke ndị ọzọ ruo nwa oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Nwere ike iji wijetị Spotify ọzọ site na beta ma jiri nke ọzọ mee ihe
Nwere ike ịhụ ugbu a igwe ojii na Google Earth na gam akporo
Anyị nwere ike ịtọọ oge izipu ozi na Telegram, anyị na-egosi gị otu esi eme ya